:: My Little World ::: Server room ...
Server room ထဲ ရေတွေဝင်တာ၊ ရေမြုပ်တာ မြင်ဖူးတယ်ရှိအောင် ဆိုပြီး လင့်တစ်ခု ပေးလာတာနဲ့့ ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။ သီချင်းနောက်ခံလေးနဲ့ ဆိုတော့ ကြည့်လို့ တော့ အကောင်းသား။ :D ကျွန်မ အနေနဲ့အခုမှ မြင်ဖူးပေမယ့် အဲ့ဒီ movie ကို Google မှာ တင်ထားတာကတော့ ၂၀၀၆ နှစ်လည်ပိုင်းလောက်ထဲကပဲ။ ဘာကြောင့် server တွေကို အဲ့လို နေရာ သွားထာတယ် မသိဘူး။ ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်တာလဲဆိုတာ လိုက်ရှာကြည့်တာတော့ ရှာလို့ မတွေ့ ဘူး။ တကယ်ဆို ဒါမျိုး အပြင်မှာ ကိုယ်တိုင်ကြုံရဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ဘူး။ ကြုံလည်း မကြုံချင်ပါဘူး။ ကိုယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘယ်သူမှလဲ ဒီလိုမျိုး အဖြစ်ခံချင်မယ် မထင်ဘူး။ တတ်လိုက်မယ့် ပြဿနာတွေ၊ စိတ်ကူးနဲ့တွေးကြည့်တာတောင် ရူးချင်သွားတယ်။Credit to THKZ
really make my heart skipabeat.breath taking site.hehehedun even want to think "what if":P
Looks like svr rm is in basement or lower lvl than ground. That's why water can pour in through the window when there isaflood in street. I reckon it is result of poor site survey.No doubt it will be nightmare to them.Ta,ZMOPS: Luckily my svr rm is in 40 story. xP
Su>> ဒီ server room ကြည့်ပြီး ဘယ်လို ခံစားရမယ်ဆိုတာ သိနေတယ် ... ဒါလေး ကြည့်နေရင်း Su ကို သတိရသွားသေးတယ်။ ZMO>> ဟုတ်တယ်။ သူတို့ က မြေအောက်ထပ်မှာ server တွေထားထားတာလို့ထင်တယ်။ ZMO ရဲ့ server က အထပ် ၄၀ မှာဆိုတော့ ရေကြီးမှာကို မစိုရိမ်ရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ငလျှင်လုပ်မှာကိုပဲ စိုးရိမ်ရမယ် ထင်တယ်။ :P